One creation per person « Global Federation for Nepali Literature (GFNL) www.gfnl.org विश्व नेपाली साहित्य महासंघ, E-mail: gfnl@ymail.com
Category Archives: One creation per person
नयाँवर्ष (खगेन्द्र अधिकारी)
बसन्तको विहानीमा पवनले छुन सकोस् नयाँवर्ष नेपालीको सुखमय हुन सकोस् अमृतको बर्षा होओस् नेपालीका शिरशिर्मा रिसराग कटुतालाई ममताले धुन सकोस् – साउदी
नयाँ युगको अनगमन (जीतमान राई ‘सबिन’)
साईली तिमीले पठाएको शुभ-कामना म स्विकारु कि नकारु ? ती अक्षरहरु मेटौ कि सजाउ ? भन म खुशी हु कि रिसाउ ? तिमी भन्छौ नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना तर खै त नया वर्षहरु ? म त देख्छु उस्तै दैनिकी थोत्रो सडकको वेरोजगारी यात्रा । पुरानै रितीथिती न त नयाँ बिचारहरु न त नयाँ उदेश्यहरु यस्तो क्षणमा कसरी स्विकारु यो नयाँ वर्षका शुभकामना ? वास्तबमा नयाँ वर्षको आगमन भनेको एउटा युगको आगमन हो तर खै त ? न युग परिवर्तन भो न बिचार परिवर्तन भो मात्र भित्ताको क्यालेण्डर परिवर्तनलाई म >>>
गल्ती हजार गरे नि मुसुक्क हाँसी दिन्छिन् (बिपुल बिक्रम सिजापति)
गल्ती हजार गरे नि मुसुक्क हाँसी दिन्छिन् आँखा तरेझै गर्छिन छातीमा टाँसी दिन्छिन् । कहीँ दौडदै लोदुँ म नयन भिज्छ उनको हर चोटको दुखाई मुटुमा गाँसी दिन्छिन् । दुवै लोचन मुदित आतुर खुसी संगाल्न मेरा माधुरी बचन्मा जिन्दगी भासी दिन्छिन् । ढाकी सप्कोले हर्दम मेहरो सरी धूपमा आफ्नै रगत जलाई औडाहा मासी दिन्छिन् । आमा बिहत छातीमा मल्हम बनी सधैँ नै भरी लेपन स्नेहको संकष्ट नासी दिन्छिन् ॥
हिउँ जोगाऊ (श्याम रिमाल)
ए, हिउँ पग्लिँदैछ हिमाललाई समाऊ शिवत्व जोगाऊ हिउँ पग्लेर हिमताल हिमताल फैलेर विस्फोट हिमनदी सुकेर खडेरी हिमाल खस्किएर कालो चट्टान ए हिमालको चुली बचाऊ हिउँको घर जोगाऊ हिउँको थुप्रोले त खिचेको छ मन शान्त स्थिर र अविचल कालो पहाडमा कहाँ हुन्छ मन जित्ने जादु किन फुट्दैनन् जमेका चिसा मनहरु किन पग्लनन् रुखा हिउँ छातीहरु निर्दोष हिमालमाथि किन यो कार्बनको मुस्लो यो साङ्गि्रला यो भूस्वर्ग मासिनुहुन्न भासिनुहुन्न हिमाल भासिएपछि हिममानव हराउला स्वर्गको बगैँचा बिलाउला हिमचितुवा भोकै पर्ला रहस्यहरु हराएपछि हाम्रो भकारी रित्तेला हिउँका सन्तानहरु मुग्लान भासिएलान् ए हिउँ जोगाऊ हिमाललाई समाऊ >>>
तालुमा आलु फल्यो (श्रीजन श्री)
तालुमा आलु फल्यो नभन्नू । पानीमा आगो बल्यो नभन्नू । रोए नि पथ्थर फूलले हान्दा यो मुटु मेरो गल्यो नभन्नू । मरेर बाच्दै, बाचेर मर्दै जिन्दगी कस्तो चल्यो नभन्नू । फलेर भीरमा, उधो न उभो भाग्यले मलाई छल्यो नभन्नू । रावणकी लंका, नढल्दा सम्म सुमेरु पर्वत ढल्यो नभन्नू । – कृष्णपुर २, काचनपुर महाकाली अनाममण्डली, मलेसिया
फिजायौ जाल (बिमल गिरी)
(गीत) फिजायौ जाल चारैतिर उत्रदै र बग्दै झर्दा बाटो छुट्यो नाता टुट्यो त्यही बोलिले गर्दा चालिरहे पाइला एक्लै पिडाबोकी मौन रुदै जीबनभरी तनाब दियौ गाठोपर्छ मन सधैं सहे कैयौ बाणहरु झुक्किएर विश्वास गर्दा बाटो छुट्यो नाता टुट्यो त्यही बोलिले गर्दा दोसी सम्झी आशु दियौ पोलिरने बिष होकी बाचिरहेछु अपमानको कालो बादल भित्र रोकी टुसाएन खुशीहरु आफन्तको भरमा पर्दा बाटो छुट्यो नाता टुट्यो त्यही बोलिले गर्दा – चारपाने झापा हाल: बेल्जियम
योग्य प्रचण्डलाई अयोग्यको चिठी (राजेश राई)
(कविता) कमरेड प्रचण्ड ! १२ बर्ष पछि म आफ्नो गाउँ खाटाम्मा आइपुगे भागेर आएको होइन म फर्काइएको हुँ अयोग्य जाँचेर फालिएको हुँ म गोविन्द राई अर्थात् गोविन्देु कमरेड ‘शिखर’ भएर आजभन्दा ९ बर्ष ३ महिना १० दिन अघि मुक्तिका लागि होमिएको थिएँ युद्धमा मैले न माक्स्र सुनेको थिएँ न माओ चिनेको थिएँ न चिनियाँ क्रान्तिको कथा नै जान्दथेँ न जान्दथेँ पेरिस कम्युनको गाथा नै केवल आफ्ना जिन्दगीका दुःखसँग परिचित थिएँ म आमाका पट्पटी फुटेका पाइतालाका साक्षी थिएँ र औषधी नपाएर दमले थलिएका बाका पीडा राम्ररी जान्दथेँ थिएन कुनै आक्रोश यो >>>
देश बिकास गर्न कसैको मुख नताकौं आफैंबाट शुरु गरौं (पुरु जोशी)
पहिले म गर्छु अनि तपाई गर्नुस् अनि हामी सबै गरौं हामी नेपाली बिदेश पलायन भएपछि मात्र देशभक्तिको साँचो आभाष पाउंछौं । देशमा हुंदा खान लाउन कुनै अप्ठ्यारो नभएर होला हामीलाई कुनै कुराको चिन्ता भएन । कोरियामा काम नभए कसैले गन्दैनन् । आफ्नै साथीहरु समेतले हेप्न थाल्छन् । खान पाउंदैनन् । तर त्यसको ठीक उल्टो नेपालमा काम नभएपनि खान पाउंछ । काम नभएपछि साथीहरुसंग बस्ने समय प्रसस्त हुन्छ र जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउंछ । अनि एउटा निहु न हो आन्दोलनमा जाने कि हुल दंगामा जाने कि जे गरे नि >>>
भन् भगवती ! (युवराज नयाँघरे)
(निबन्ध) आज चैँ चर्कियो कलह ! यो कलह मानिस नहुँदाको । बरु मानिस हुँदा झगडा हुँदैन्थ्यो होला । आज पल्टा खाइरहेको अवस्था छ गाउँमा । आँगन जोडिएको दुई घरमा मानिस छैनन् । सबै पसेका छन् खाडी र जोहो गरेका छन् साँझबिहानको चुलो तताउने । तर यतिबेला लासको बाकस आएर बसेको छ आँगनमा । अनेक अड्कलबाजीका शब्दको पालोपहरो छ छ । भगवती र अमरावतीका कुरा सुनिरहेको छु म । सँधैको विपन्न्ा बिजोग र बेहालमा समयका पाङ्ग्रा गुडाए यिनले । गाउँमा मान्छेको हाहाकार भएर के-के ठानिरहेछन् यी सरल अनुहार ! अर्थ आँफै >>>